Mugabe - Topic - Digital Journal
Harare	- Zimbabwe's founding president Robert Mugabe had "advanced cancer" when he died in hospital in Singapore on September 6, the state-owned newspaper reported on Monday.
Harare	- Zimbabwe's frosty relations with Western powers are thawing despite tensions caused by a brutal repression of protests, the country's foreign minister says.
Harare	- Zimbabwe gave former leader Robert Mugabe a state funeral on Saturday with African leaders paying tribute to a man they lauded as a liberation hero but whose 37-year rule was defined by repression and economic turmoil.
Harare	- The family of former Zimbabwe leader Robert Mugabe have agreed to bury him at a monument for national heroes in Harare, the family said on Friday, though the date for the ceremony remained unclear.
Harare	- The family of former Zimbabwe leader Robert Mugabe have agreed to bury him at a monument for national heroes in Harare, a family spokesman said on Friday though the date for the ceremony was still unclear.
Harare	- Zimbabwe ex-president Robert Mugabe's family and the government appeared to be deadlocked on Thursday over his final resting place after relatives snubbed a plan for him to be buried at a national monument.
Harare	- Zimbabwe's former president Robert Mugabe will be buried early next week in his village and not at a national monument for liberation heroes, his family said on Thursday.
Harare	- Once feared for the all-encompassing power he wielded in Zimbabwe, Robert Mugabe died a "broken soul," bereft at his downfall, his allies and relatives say.
Harare	- The body of Zimbabwe's ex-president, Robert Mugabe, arrived home on Wednesday to an honour guard in a country divided over the legacy of a former liberation hero whose 37-year rule was marked by repression and economic ruin.
Harare	- Close relatives and government officials flew out of Zimbabwe on Monday to collect the body of ex-president Robert Mugabe from Singapore where he died last week, his nephew said.
Harare	- Zimbabweans entered a first full day of national mourning on Saturday, divided over the legacy of Robert Mugabe, the guerrilla hero turned despot who ruled the country for 37 years.
Harare	- Robert Mugabe, the former guerrilla hero turned despot who ruled Zimbabwe for 37 years until the military forced him out, has died aged 95.
Harare	- Robert Mugabe, who led Zimbabwe with an iron fist from 1980 to 2017, has died aged 95, the country's president announced Friday.
Harare	- Robert Mugabe, who has died aged 95, used repression and fear to hold on to power in Zimbabwe for 37 years until he was finally ousted when his previously loyal military generals turned against him.
Harare	- Zimbabwean businessman Munya Chihota's face lights up when he recalls taking part in a march last year with tens of thousands of people calling for then-president Robert Mugabe to step down.
Harare	- Zimbabwe's former president Robert Mugabe, who had vowed not to vote for his old party in elections in July, on Thursday said he accepted the outcome of the disputed poll.
Harare	- Zimbabwe’s former president Robert Mugabe, who was ousted by the military in November, made a surprise intervention Sunday on the eve of key elections, calling for voters to throw his old party out of office.
Harare	- Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa suspects "aggrieved" supporters of Robert Mugabe's wife were behind a blast that killed two people at a rally last weekend, according to a BBC interview aired on Wednesday.
Harare	- Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa suspects "aggrieved" supporters of Grace Mugabe were behind a blast that killed two people at a rally last weekend, according to a BBC interview on Wednesday.
Harare	- A Zimbabwe parliament committee has summoned former president Robert Mugabe to give evidence on May 9 over diamond corruption costing billions of dollars, underlining his fall from power after 37 years of autocratic rule.
Harare	- Zimbabwean police investigating an ivory-smuggling racket will soon question former ruler Robert Mugabe's wife Grace, who is accused of arranging shipments abroad, a government-owned newspaper reported Friday.
Harare	- Zimbabwean police are investigating former ruler Robert Mugabe’s wife Grace, accused of smuggling ivory worth millions to underground foreign markets, a state-owned weekly reported Sunday.
apis-429330 apis-408892 apis-404672 apis-404576 apis-404464 apis-404458 apis-404458 apis-404156 apis-403611 apis-403582 apis-403534 apis-403532 apis-403450 apis-403444 apis-403385 apis-403360 apis-403248 apis-403125 apis-403108 apis-403069 apis-403068 apis-403067 apis-381845 apis-375746 apis-372432 apis-369783 apis-369762 apis-364048 apis-362901 apis-361965